Ka dib markii dib loo furay dukaamada Apple ee Michigan, dhammaan Dukaamada Apple ee ku yaal Mareykanka way furan yihiin Waxaan ka socdaa mac
Kadib dib u furida dukaamada Apple ee Michigan, dhamaan Bakhaarada Apple ee Mareykanka way furanyihiin
Dhamaadkii bishii Abriil, markii Dukaammada Apple ee Apple ku faafay Mareykanka oo dhan, illaa 300, ay caadi ku soo noqdeen dhammaantoodna ay furan yihiin, sababtoo ah kororka infekshinnada ee Michigan, shirkadda ku taal Cupertino lagu qasbay hoos u dhig indhoolayaasha 6-da bakhaar ee uu ku qaybiyey gobolka.
Bil kadib, Apple waxay cusbooneysiisay macluumaadka saacadaha dukaamada ay ku leedahay gobolkan si ay ugu wargeliso macaamiisha in dukaamada ay mar kale u furan yihiin dadweynaha guud kaliya ku kooban wax iibso ama amar qaado.
Illaa iyo hadda, sida aan kor ku soo sheegay, dukaamada ku yaal gobolka Michigan ayaa ahaa kuwa kaliya ee weli u xirmay sababo la xiriira heerka ugu sarreeya ee infekshannada ee la ogaaday dhammaadkii Abriil. Nasiib wanaagse, maadaama tallaalladu ay horumar ka sameeyeen Mareykanka, xiritaankani wuxuu socday 3 toddobaad.
Gobolka Michigan, Apple waxay leedahay 6 dukaan oo loo qaybiyey:
Apple Briarwood oo ku taal Ann Arbor
Apple Partridge Creek oo ku taal Clinton Township
Apple Woodland oo ku taal Grand Rapids
Xarunta Apple Eastwood Towne ee ku taal Lansing
Apple Laba iyo toban geed oo ku yaal Novi
Apple Somerset ee Troy
In ka badan 500 oo dukaan oo u gaar ah oo uu Apple ku faafay adduunka, xilligan midkoodna shacabka uma xirna, inkasta oo ay jiraan xaddidaadyo.
In kastoo magaalooyinka qaar sida New York Mar dambe qasab ma aha in la isticmaalo maaskaro Dhammaan dadkaas horay loo tallaalay, Apple waxay soo saartay bayaan maalmo ka hor ay ku sheegtay inay ku heli karto dhammaan dareenkooda, isticmaalka maaskaro ayaa sii ahaan doona mid qasab ah, shaqaalaha iyo martida.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Kadib dib u furida dukaamada Apple ee Michigan, dhamaan Bakhaarada Apple ee Mareykanka way furanyihiin
Isbeddelada ku yimid rarka amarrada Apple TV 4k cusub
24-inji iMac usbuuc ah